काठमाडौं, भदौ १ -
विगत केही वर्षयता झापाका बाढीपीडितको एउटै गुनासो हुन्थ्यो – समयमा राहत आएन । राज्यका निकायले हेरेनन् । तर, अहिले अवस्था फरक छ । तराईका अन्य जिल्लामा उद्धार तथा राहत प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला झापामा भने यसपटक पीडितको त्यस्तो गुनासो छैन । यो खबर हामीले आजको नागरिकबाट लिएका हौ।
श्रीनगर, भदौ १ -
भारत र चीनको सीमामा दुई देशका सेनाबीच झडप भएको छ । पश्चिम हिमालय क्षेत्रको लद्दाखस्थित लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलओसी) मा दुई देशका सेनाबीच मंगलबार ढुंगा हानाहान भएको भारतीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । प्याङगोङ तालनजिकैको भारतीय भूमिमा चिनियाँ सेना प्रवेश गरेपछि दुवै देशका सेनाले एक–अर्कालाई हतियार ताक्ने प्रयास गरेका थिए । यो खबर एजेन्सीलाई उद्धृत गर्दै आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।
काठमाडौं, भदौ १ - गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा स्थापित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति व्यक्तिलाई वितरण गर्ने निर्णय भएको छ। संस्थाको कोषमा रहेको करिब १० करोड रुपैयाँ सञ्चालकहरूका नाममा बाँड्ने निर्णय भएको हो। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ। कलेज स्रोतबाट प्...
भारतीय तटबन्धले डुबान
सप्तरी, भदौ १ -
कोसीको पानी नेपाली भूभागमा छिरेका कारण सप्तरीको भारदहदेखि तिलाठीसम्मको करिब एक सय ६० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र डुबानमा परेको तथ्य फेला परेको छ। यसबाट ६ सय परिवारको उठिबास भएको छ भने हजारौं बिघा जमिनमा लगाइएको धानबाली सखाप भएको छ। यो खबर विकास थापा/मनोहर पोखरेलले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
प्रहरीमा भद्रगोल : एसएसपी प्रमुख हुने कार्यालयमा डिआईजी !
छविलाल जोशी र ठूले राई नेपाल प्रहरीका डिआईजी हुन् । तर, यी दुवै महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुखमा थन्किएका छन्।
काठमाडौं र ललितपुर परिसर प्रमुख एसएसपी हुने प्रावधान भए पनि गृह मन्त्रालयले पदस्थापन नगर्दा दुवै प्रहरी अधिकारी डिआईजीको फुली लगाएर एसएसपीको भुमिकामा छन्। यो खबर आजको नागरिकमा छापिएको छ।
देशभर सडक मर्मतमा चार अर्ब
सरकारले देशभर सडक मर्मत गर्न वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरेको छ। सडक मर्मतका लागि सरकारले आयल निगम र यातायात व्यवस्था विभागमार्फत वार्षिक २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन गरिरहेको छ। सडक मर्मतका नाममा सरकारले सडक बोर्ड ऐन २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर रकम संकलन गर्छ। तर यो रकमबाट सडक बोर्ड नेपाललाई वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ। यो खबर राजु बाँस्कोटाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
न रहे बाआमा, न रह्यो घर
इटहरी, भदौ १ -
एघार वर्षे निशान राई राति आमाबुबा खोज्दै बर्बराउँछन्। दिदी पन्ध्र वर्षीया कमला एकोहोरो टोलाइरहन्छिन्। भाइ निमेषसहित बुबा राजकुमार र आमा आशालाई शुक्रबार बाढीले इटहरी ४ गैरीगाउँबाट घरसहित बगाएपछि उनीहरू बेसहारा छन्।
अब जेल नबसी सर्वोच्च जान पाइने
उच्च अदालतबाट तीन वर्षभन्दा कम जेल सजाय तोकिएका कसुरदारले धरौटी राखेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन्। यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
‘अकुत' कारबाहीमा अख्तियार असफल
काठमाडौं, भदौ १ - भ्रष्टाचार कानुनमा राष्ट्रसेवकलाई सम्पत्तिको स्रोत आफैंले पुष्टि गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरिए पनि अकुत (गैरकानुनी) सम्पत्ति पत्ता लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन झण्डै असफलजस्तै भएका छन्। यो खबर यम विरहीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।...
काठमाडौं, भदौ १ - संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सर्वदलीय सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सहमति भएलगत्तै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत भएको छ। यो खबर हाम...
काठमाडौं, जेठ २२ -
सरकारी कार्यालयका टेलिफोन नम्बर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन् । विश्वास नलाग्न सक्ला तर राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि मन्त्रालय र विभागका फोन नम्बर अरू नै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । यो खबर अजय शर्माले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
यूएईको दुबईमा भोताङ-८ सिन्धुपाल्चोककी २५ वर्षीया लप्साङ तामाङको मे २० मा हत्या भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
काठमाडौं,जेठ २२ -
संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आइतबार ११ बजे प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यसूची थियो। तर, चितवनको भतरपुरमा पुनः मतगणना गर्नुपर्ने तथा संसद्बाहिरबाट सुरु गरिएको निर्वाचन प्रक्रिया मान्य नहुने भन्दै एमालेले संसद् अवरोध कायमै राख्ने जनाएको थियो। सभामुख ओनसरी घर्तीले सहमतिको प्रयासका लागि ३ बजेसम्म सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरेकी थिइन्। यो खरब हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
देउवाले सरकारमा सहभागी हुन राप्रपालाई शनिबार पठाएको पत्रमा चार मन्त्रालय दिने, तर उपप्रधानमन्त्री दिन नसक्ने उल्लेख रहेको नेताहरूले बताएका छन् । पत्र पठाएलगत्तै देउवाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र नेता पशुपतिशमशेर राणालाई छलफलका लागि बोलाएका थिए ।
डोटी, जेठ २२ -
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) लाई सरकारसँग सहमति भएको पत्र पाउनासाथ चुनाव चिह्न प्रदान गर्न प्रक्रिया थाल्ने आश्वासन दिएको छ। राजपा शीर्ष नेतृत्वसँग आइतबार बहादुरभवनस्थित कार्यालयमै गरेको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचन चिह्न प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्ने आश्वासन दिएका हुन्। राजपाले चुनाव चिह्नका लागि एक-दुई दिनमै आयोगमा दल दर्ता गर्ने भएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
बन्लान् त महानगर स्मार्ट?
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर लोकप्रियता कमाउन खोजे। शपथ ग्रहणकै दिन जनप्रतिनिधिबीच भत्ता बढाउने होडबाजी चल्यो। भत्ता बढाउने घोषणा गर्न महानगरका मेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्म पछाडि परेनन्। होडबाजी यतिसम्म चल्यो, केन्द्र सरकारले बजेटमा छुट्टाएको रकमबाट आफूखुसी भत्ता नबढाउन निर्देशन नै दिनुपर्‍यो। यो खबर नवीन अर्यालले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
काठमाडौँ, जेठ २१ -
गुल्मी, जेठ २१ -
जातीय विभेदका कारण अधिकांश मन्दिरमा दलितलाई भित्र पस्न दिइँदैन। उनीहरूले परैबाट देउताको दर्शन गर्छन्। गैरदलितले मन्दिरबाहिर ल्याइदिएको टीका र प्रसाद मात्र उनीहरूले पाउँछन्। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
राजपाले देउवालाई सघाउने!
सिंहदरबारस्थित काँग्रेसको संसदीय दलमा राजपा नेपालसँग सभापति देउवाले गरेको छलफलमा त्यस्तो सङ्केत गरेको हो। आफ्नो नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकार पुरानै गठबन्धनको निरन्तरता भएकाले सरकार गठनमा सहयोग गर्न राजपा नेपालका नेताहरूलाई आग्रह गर्दै सभापति देउवाले भने, ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार स्थानीय तहको चुनाव र संविधान संशोधनको कार्यभार लिएर बनेको हो, त्यसलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिने भएकाले गठबन्धनलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नुहोस् । ’
पूर्वराजा वीरेन्द्रको जग्गाः मासिक भाडा एक रुपियाँ!
पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको जग्गा उपभोग गर्दै आएको संस्थाले विगत नौ वर्षदेखि उक्त जग्गाको भाडा बुझाएको छैन। भाडा वापतको रकम बुझ्न नेपाल सरकार नै अन्योलमा परेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। यो खबर प्रकृति अधिकारीले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
भैरहवा, जेठ २१ -
एक सेकेन्ड पनि पतिसँगै देखभेट-उठबस नगरी हकदारका रूपमा ९० लाखभन्दा बढी रकम बुझ्दा नन्दनी माली अचम्ममा परेकी छन्। रुपन्देही शुद्दोधन नगरपालिका निवासी उनी कतारको दोहामा ज्यान गुमाएका पति नन्दकुमार पासीको वियोगमा छिन्। उनीहरूको जोडी अभिभावकले बाल्यकालमै जुराइदिएको हो। यो खबर कृष्णप्रसाद ढकालले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
जनप्रतिनिधिमा लोकप्रिय बन्ने होड
‘युवालाई फ्री वाईफाई, वृद्धवृद्धालाई थप भत्ता !’ पहिलो चरण स्थानीय निर्वाचनताका सबैजसो उम्मेदवारले उठाएका लोकप्रिय नारा हुन् यी। निर्वाचन सकिएसँगै कसैले व्यक्ति र समूहलाई खुसी पार्नेगरी नगरको पहिलो बैठकबाट निर्णय गरेका छन् भने कसैले नेपाल भाषालाई पनि सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग गर्ने अठोट सार्वजनिक गरेका छन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ठूलो छाती बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको औपचारिक उम्मेदवारी तय गर्न शनिबार बिहान बसेको पार्टी कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पौडेलले भने, ‘सिंगो कांग्रेसको नेता र सभापति बन्ने कि नबन्ने ? सुधार तपार्इं (देउवा) बाट हुनुपर्छ।’ उनले अहिलेकै परम्परागत शैलीमा सरकार बन्ने र फेरिने घटनाले जनताको मन जित्न नसकिने बताए। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।